Nimco Gabaydo: Abwaan Kalle Oo Galbaday – Oodweyne Online
Nimco Gabaydo: Abwaan Kalle Oo Galbaday
odweyneMarch 19, 2015Last Updated: November 30, 2020
Hargeysa, Somaliland – Alle ha u naxariiste Abwaanadii weynayd ee reer Somaliland Nimco Aadan Hurre (Nimco Gabaydo) ayaa xalay lagu aasay Xabaalaha Naaso-hablood ee magaalada Hargeysa, kadib markii ay shalay galab Marxuumaddu ku geeriyootay Cusbitaalka guud ee Magaalada Hargeysa, halkaas oo ay Marxuumaddu indhowaaleba xanuun u jiiftay.
Nimco Gabaydo waxaa ay ka mid ahayd ama hormuud u ahaydba hal-abuuradda waqtigan, waxaana ay gaar u lahayd oo ay dhigeed dheerayd suugaan Dhumuc leh oo aan Indhawaale Xaawalay lagu arrag.
Abwaan Nimco waxay dhalatay 1969-kii 1983-kii ay ka baxday dugsiga dhexe, iyada oo aan markaasi dugsi sare u gudbin, waa ay guursatay waxayna waqtigan haysatay afar caruur ah oo ay dhashay saddex wiil iyo gabadh, gabaygii ugu horeeyey waxay tirisay marxuumadu Ocotober 21-keedii sannadkii 1991,. Waxaana suugaanteedu u fiday si weyn iyaddoo dhinacyo badan ka gabaydday, waxaana illaahay qabriga ha u nuuree, Nimco Gabaydo waxaa hal-abuurkeedii ugu dambeeyay lagu xusuusan karaa iyadoo xanuunka ay hadda u hoyatay u jiifta maansadii baroor-diiqda ahayd ee ay ugu baroor diiqdey Alle ha u wada naxariistee Xoghayihii ururka SOLJA, Maxruum Maxamed-Rashiid Muxumed Faarax, dabayaaqadii sannadkii ina dhaafay.
Marxuumad Nimco waxa ahayd qof runta jecel isla markaana mabda’ adag, oo runtu qadhaadh kastooy leedahay aan ka baydhi jirin. Sidoo kale waxay ahayd qof dulmiga neceb, cidna aan garab ku siinin gardaro iyo dulmi.
Nimco gabaydo waxaa suuggaanteedii lagu tilmaamaa kuwo aad u shishlaa oo kolba mawduuca ay ka maansoonayso toos u taabanaya, waxaanay had iyo jeer ka gabyi jirtay xaaladda dalka ee siyaasi, nololeed iyo ijtimaaci.
Illaahay Naxariistiisa Jannatul-Fardowsa, haka waraabiyo, dambigeedana ha dhaafo, qabrigana ha u nuuro ha una ballaadhiyo.
Bahda Saxafi Media Network oo ay si gaar ah geerideeda Nimco Gabaydo u taabatay, waxay tacsi u dirayaan qoyskii, ehelkii, bahda Fanka iyo Suuggaanka iyo ummadda reer Somaliland ee ay ka baxday Marxuumaddu, Waxaannu Marxuumadda ALLAAH uga baryeynaa inuu Naxariista Janno ka waraabiyo, Samir iyo Iimaan Saadiq ahna ka siiyo Qoyska, Ehelada, Qaraabada, Asxaabta iyo guud ahaan Shacabka Somaliland ee ay ka baxday. Aammiin… Aammiin…Aammiin…Allaah ha aqbalo.
Gabayadeedda haddaan mid ka soo qaato waxaa ka mid ah: “Hadduu Dabluhu yahay Fariidka
Nin liidkuna sii dallacayo
Haddii Geesiga iyo Diraca
Fuluhu ka dubaalad dheeryahay
Hadduu Deeqsigu saboolay
Bakhaylkuna Duunyo Haysto
Haddii laga maamay Daacad
Hadday Dembi tahay Xaqiiqdu
Daruurina noqotay Beentu
Caddaalad haddii la duugay
Garsoorkii Daadku qaaday
Dastuurkii la bililiqaystay
Diiwaangelintii la laalay
La dumiyoo labadii Golena
Dubbiyo loo qaatay Cawjad
Dikteetar Hadduu ifaayo
Hadduu Daba-dhilif adeego” ayaa ka mid ahaa